मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा बैंकका गार्डमाथि कुटपिट « Pen Nepal
मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा बैंकका गार्डमाथि कुटपिट
Published On : 19 August, 2020 7:38 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकामा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको छ । बैठकका गार्डले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा बैंकका सुरक्षागार्डसहितका कर्मचारीलाई स्थानीय युवाले कुटपिट गरेका छन् ।
कुटपिटबाट बैंकका कर्मचारी डोलराज श्रेष्ठ र वेदप्रसाद श्रेष्ठ घाइते भएका छन् । चापकोट बासिन्दा तथा समाजसेवी डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले मास्क लगाउन आग्रह गर्दा बैंकका कर्मचारीमाथि भएको कुटपिटको घटनाले नगरवासीमा असुरक्षित महशुस भएको बताए ।
‘कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारीले कृपया मास्क लगाएर मात्र भित्र आउनु होला भन्दा निर्मम तरिकाले पिटिएको खबरले मर्माहत बनाएको छ’ उनले भने । ‘यो घटनाबाट सिंगो चापाकोट नगरवासीले आज असुरक्षित महसुस गरेका छन् । आफ्नै टोलका दाजुभाइलाई पिटेर हामीले कस्तो पुरुषार्थ देखाउदै छौं ?’
डा. श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । ‘स्थानीय सरकार जनताको शान्ति सुरक्षामा खेलवाड नगरोस्’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले पीडितलाई न्याय दिलाई आमनागरिकमा शान्ति सुरक्षा एंव अमनचयनको प्रत्याभुति दिलाओस ।’
चापकोट नगरपालिकामा यसअघि पनि विभिन्न पटक कुटपिटका घटना हुँदै आएको छ । केही महिना अघि योजना सम्बन्धी काम शिलसिलामा नगरपालिका पुगेका वडाध्यक्षमाथि मेयर शिव गिरीले नै हातपात गरेको घटना समेत सार्वजनिक भएको थियो ।
डा. श्रेष्ठले नगरवासी र युवालाई बदनामित हुने कार्य नगर्न आग्रह समेत गरेका छन् । ‘ आफ्नै नगरपालिकालाई किन बदनाम गराउदै छौं ?’ उनले भने, युवामा मेरो आग्रह छ कसैले गल्ती गर्यो भने पनि सम्झाउने हो आफू भन्दा जेठोलाई आदर गर्ने हाम्रो संस्कार हो । त्यसैले यस्ता गलत कार्य नगरौ । यस्तो कार्यले आफ्नो मात्र हैन आफ्नो ठाउँको समेत बेइजत हुन्छ ।’